Nomena ny nomeraon-telefaona an'i Vince McMahon ny Legendary Superstar taorian'ny nahazoany ny titre WWE - Wwe
Rahoviana ny WWE Superstar no mahazo ny laharan-tariby mivantana an'i Vince McMahon?
Ny maha-lehilahy ambony anao ao amin'ny WWE dia misy tombony sy tombony azo amin'izany, ary ny iray amin'izy ireo dia ny fifandraisana mivantana amin'i Vince McMahon.
Vince McMahon dia tia mifandray tanana amin'ireo tompon-daka eran-tany, ary i Kurt Angle dia niresaka momba ny fiovan'ny fifandraisany tamin'ny filohan'ny WWE taorian'ny nahazoany ny titre WWF (WWE ankehitriny) tamin'ny 2000.
Amin'ny fanontana farany an'ny 'The Kurt Angle Show' ao amin'ny AdFreeShows.com , ny Hall of Famer dia manazava ny fomba ifandraisan'i Vince McMahon amin'ireo kintana malaza indrindra WWE. Tsy mahagaga raha manakaiky kokoa ireo mpihetsiketsika izay mahazo azy indrindra i Vince McMahon.
Nanampy i Kurt Angle fa tompon-daka eran-tany WWE dia nomena ny nomeraon-telefaona an'i Vince McMahon ary tsy maintsy miomana amin'ny antso ho avy amin'ny fotoana rehetra. Afaka miantso an-telefaona an'i Vince McMahon koa ny tompon'ny titre isaky ny ilaina izany, ary mamaly hatrany i McMahon.
Mahatsapa i Angle fa ny WWE Superstar dia manangana fifandraisana tena matanjaka amin'i Vince McMahon raha tsy avy nahazo ny anaram-boninahitra ambony.
'Tsy misy isalasalana. Vince dia mifandray amin'ireo tovolahy izay manome vola be indrindra aminy, ary rehefa ianao no lehilahy ambony, Tompondaka Eran-tany, dia mahazo ny nomeraon-telefaoniny ianao, ary afaka miantso azy ianao isaky ny tianao, dia hamaly izy, ary hamaly izy miantso anao isaky ny mila izy dia valio. Mandeha amin'ny lalana roa izy io, saingy, eny, raha vao mahatratra izany haavo izany ianao dia tafiditra ao amin'i Vince, ary amin'izay ianao manorina fifandraisana tsara aminy. '
Nasehon'i Angle fa vao nahazo ny nomeraon-telefaona an'i Vince McMahon ihany izy taorian'ny nahazoany ny amboara manerantany voalohany tao amin'ny orinasa.
richard williams (mpanazatra tenisy)
Ny fihetsik'i Vince McMahon manoloana ny fandresen'i Kurt Angle an'izao tontolo izao voalohany
Kurt Angle dia nampatsiahy ny atmosfera ambadiky ny sehatra taorian'ny nandreseny ny amboara WWE tamin'ilay The Rock at No Mercy 2000.
Nilaza i Angle fa nofihinin'i Vince McMahon izy taorian'ny lalao ary tena reharehan'ny lehiben'ny medaly volamena olimpika. Hitan'i Angle i Vince McMahon ho toy ny raim-pianakaviana ary ny fanehoan-kevitry ny talen'ny WWE CEO dia nisy dikany lehibe taminy.
'Nitsangana izy, nofihininy aho, ary hoy izy, vitanao izany, reharehako ianao. Ary izany no nahatonga an'izao tontolo izao ho ahy, satria niandrandra an'i Vince foana aho ho toy ny raim-pianakaviana, ary, fantatrao, fa hanana kintana efatra miaraka amin'ny The Rock dia nofinofy tanteraka. Izany no nofinofy tonga lafatra mba hahazoana ny amboara eran-tany manoloana ny iray amin'ireo anarana lehibe indrindra amin'ny orinasa ary ho Tompondaka Erantany voalohany. '
Kurt Angle koa dia niresaka momba ny fanorohany an'i Stephanie McMahon sy ny fomba tena tsapany ny momba ny tantara nandritra ny podcast niaraka tamin'i Conrad Thompson mpampiantrano.
Raha misy teny nindramina nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, azafady mba omeo voninahitra ny 'The Kurt Angle Show' ary omeo H / T ny Sportskeeda.
mahafinaritra ny manao zavatra ao an-trano, rehefa ny noloahany
rehefa mijery ny masonao izy
firy taona i dan sy phil
mbola tsy nanao firaisana mihitsy aho taloha
rehefa mahatsiaro irery ianao amin'ny fanambadiana
ahoana no ahafantaranao raha misy manohana anao
inona no dikan'ny hoe manolo-tena amin'ny olona iray